Diarin’ny COVID-19 avy any Wuhan : « Tsy tanàna fotsiny no nahiboka, fa koa ny feonay. » · Global Voices teny Malagasy
Rehefa alina, ventesin'ny mponina ao Wuhan ny « Mahereza, ry Wuhan ».
Nandika (fr) i LnJacco
Voadika ny 02 Avrily 2020 13:13 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, srpski, Español, Français, русский, Ελληνικά, عربي, Nederlands, বাংলা, Shqip, Filipino, English
Filaharana tao amin'ny toerana fivarotana fanafody tao Wuhan. Sary an'i Guo Jing.
Fanamarihana: izay rohy tsy nasiana fanamarihana dia mankany amin'ny pejy amin'ny fiteny shinoa.
Nahiboky [angl] ny governemanta shinoa ny tanànan'i Wuhan, ivo sy toerana niaingan'ny COVID-19, nanomboka ny 23 Janoary 2020. Tao amin'ity tanàna misy mponina 11 tapitrisa ity, efa ho 6 tapitrisa ireo olona natoka-monina nandritra ilay valanaretina, raha ireo 5 tapitrsa hafa kosa nandao ny tanàna mba hiala sasatra.
Maro tamin'ireo olona nahiboka araka izany no nanomboka nanoratra ny diariny manokana. Koa satria voasivana matetika ao amin'ny Weibo (ilay tambajotra sôsialy shinoa malaza) ireo endrika ratsy rehetra amin'ny fiainana andavanandro ao Wuhan, ka mety hisarika ny sain'ireo mpanivana, dia tao amin'ny WeChat, sehatra iray malaza ao Shina no nivezivezy ireo diary nifanakalozan'ny mpinamana.
Na izany aza, vitan'i Ai Xiaoming, mpamokatra horonantsary miasa tena no sady feminista mpikaroka, ary koa ilay feminista mpikatroka, Guo Jing, ny nizara ny diarin-dry zareo tao amin'ny Matters News. Fijoroana vavolombelona sarobidy izy ireny, maneho ireo fihetsehampo tsapan'ny vahoaka izay rehefa injay niharan'ny fanibohana tampoka teo.
Nanamafy tokoa ireo manampahefana shinoa sy ny Fikambanana Erantany misahana ny Fahasalamana fa nahitana fahombiazana mivaingana ireo fepetra fifehezana noraisin'i Shina mba hanafoanana ilay valanaretina, saingy tsy tokony hodiana tsy hita ny fiainan'ireo olontsotra iharan'ny fiantraikan'ireny fepetra fanibohana sy fanarahana maso avy any ambony ireny — aoka tsy ho adinoina ny fanasaratsarahana ny olona lasa ho toy ny vongana tsy misy anarana, araka ny famaritan'i Guo Jing azy ao anatin'ny diariny.
Nanomboka ny 8 Desambra, andro voalohany nahitàna ny tranga voalohany, nohitrikitrihan'ireo manampahefana shinoa ny filazàna hoe efa voafehiny ilay viriosy. Ny 20 Janoary, voatery niaiky [fr] izy ireo hoe nisy ny fifindran'ny valanaretina teo amin'ny samy olombelona. Lazain'ny diary manokan'i Ai et Guo ny nitazonana ireo mponina tao Wuhan tsy hahalala na inona na inona sy ny tsy niomanan-dry zareo velively tamin'ny fanapahankevitry ny governemanta haniboka ilay tanàna.
Hanome andiany avy amin'ireo diarin'i Ai Xiaoming sy Guo Jing ny Global Voices. Ireo tsonga voalohany dia voasoratra nandritra ny herinandro voalohany nihibohana, teo anelanelan'ny 23 sy 28 Janoary 2020.
Guo Jing : ny 23 Janoary 2020
Tsy olona be korapaka aho, saingy nanomboka nisavoritaka kosa tamin'ny 20 Janoary rehefa voamarina fa nisy tranga 100 mahery tao Wuhan ary nanomboka niseho ireo tranga voamarina tany amin'ireo tanàna sy faritàny hafa. Mazava fa, hatreto, nafenin'ireo mpampahalala vaovao taminay ny zavamisy hoe niparitaka teny rehetra teny ity valanaretina ity. Nitombo be tsy nisy toy izany ny isan'ireo olona nitondra tampimbava nanomboka tamin'izay andro izay, ary lafo daholo ireo tampimbava fampiasan'ny mpitsabo. Marobe koa ny olona no nividy fanafody fiarovana amin'ny hatsiaka.
Nandritra ny andro maro aho no velona ahiahy. Araka ireo vaovao farany, ny ankamaroan'ireo olona voamarina tany amin'ny toerana hafa dia toa nitsidika an'i Wuhan talohan'ny 15 Janoary avokoa. Wuhan no tanàna iray eto an-tany manana mpianatra betsaka indrindra any amin'ny kolejy, ary nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Janoary ny fialantsasatry ny anjerimanontolo. Ankehitriny, miverina mody ny olona hiatrika ny taombaovao shinoa, araka izany dia be ny olona mifamoivoy any amin'ireo toerana fandraisana fiarandalamby. Kanefa, tsy narahana maso araka ny tokony ho izy ireo toerana fandraisana fiarandalamby tao Wuhan. Tsy vonona ny hody hiatrika ny taombaovao aho. Azo antoka kokoa ny mijanona aty amin'ny misy ahy aty. Saingy, io maraina io, hitako ny fanambaràna ny fanibohana ny tanàna ka dia nanomboka nisaritaka aho. Tsy haiko izay fiantraikan'ny fanibohana tahaka izany sy izay ho faharetany no sady tsy haiko ny fomba hiomanana ho amin'izany.
Niteny tamiko ireo namako mba hanangonako izay zavatra tena ilaina. Tany am-piandohana, satria aho tsy te-hivoaka ny trano, dia tety anaty tambajotra aho no nanafatra izay nilaiko. Saingy nampiasa loha ahy ny hoe mety hiato tampoka ireo tolotra fanaterana entana. Sady koa te-hahalàla izay miseho any ivelany aho. Izany no antony nivoahako. Lehibe na somary efa nahazoazo taona daholo ireo olona teny an'arabe, ary vitsy ny tanora. Rehefa nankany amin'ny toeram-pivarotana lehibe teo akaiky teo aho, filaharana lavabe no hitako teny amin'ireo fandoavana vola. Tsy dia nisy sakafo tavela firy intsony, toy ny vary sy paty. Nahatohina ahy izany ka dia noraisiko haingana daholo izay azoko. Nisy lehilahy iray nividy sira be dia be ary rehefa nanontaniana azy ny antony, nambarany fa sao sanatria haharitra taona iray ilay fihibohana.
Rehefa avy nividy sakafo vitsivitsy, mbola tsy tonga saina ihany aho. Vitsy ireo fiara sy mpandeha an-tongotra teny an'arabe. Tampoka teo dia nikatona ny tanàna. Rahoviana izy no haresaka indray?
Ai Xioming : Ny 24 Janoary 2020
Alina mialoha ny taombaovao shinoa izao. Tsy mbola nangina tahaka izao mihitsy i Wuhan. Izao anefa no andro tokony hihaonan'ny fianakaviana manontolo. Betsaka ireo fiarahana misakafon'ny fianakaviana no nofoanana. Hitako ireo saripika omaly momba ny tanàna nahiboka: etsy ankilany, ireo miaramila sy ny pôlisy ary, ery andaniny, ireo mpivahiny naverin-dàlana. Tany ambadiky ny fakantsary, nisy olona iray niteny tamin'ny fitenin'ny ao Wuhan hoe: « Jereo, sambany izao tao anatin'ny taonjato maro no tsy nakatona ny toerana fandraisana fiarandalamby eto Hankou ». Nisy zavatra nangeja tampoka teo tao anatin'ny foko tao, toy ny hoe nisy lakolosinà fotoana manantantara iray naneno.
Ao amin'ny distrikan'i Jiangxia aho no mipetraka, 40 kilaometatra eo ho eo miala ny toerana fandraisana fiarandalamby ao Hankou… Azoko an-tsaina ny horohoron'ireo olona tsy navela hody any aminy talohan'ny Taombaovao. Inona no tokony hataon-dry zareo ? Tampoka teo dia nahiboky ny governemanta ny tanàna. Aiza ry zareo no hahita toerana hipetrahana? Inona no azon-dry zareo atao amin'ity Taombovao ity?
Mino aho fa ireo olona manana ny fahefana ireo dia samy mitondra ny « soritraretin'ny vaovao tsara » daholo : na inon-kidona, na inon-kihatra, tsy te-handre afa-tsy vaovao tsara ry zareo, tsy miraharaha na marina izany na diso. Rehefa tsy misy, dia mamorona. Raha toa ianao milaza amin-dry zareo hoe diso izany, hiziriziry hatramin'ny fara-fofonainy ry zareo.
Fantatrareo izay zavatra resahako. Ilay ramanavy kely, ilay lasopy misy ramanavy. Misy saripika sy lahatsary mandehandeha any rehetra any. Kanefa, mody fanina tsy mahita ilay elefanta eo afovoan-trano daholo isika. Tsy tokony hanàla volom-bavan-tsaka matory.
Fotoana fohy taorian'ny nanibohana an'i Wuhan, nisy lahatsary nalaza be teny anaty tambajotra shinoa. Eritreretin'ny maro amin'ireo trano famoahambaovao ao Shina fa an'ireo mpihinana ramanavy ny hadisoana niteraka ity valanaretina ity. Nefa tsy sakafo fihinan'ny ao Wuhan velively ny ramanavy. Taty aoriana dia fantatra fa tany amin'ny nosy iray tao Pasifika no nandraketana [angl] ilay lahatsary.
Lasopy misy ramanavy. Pikantsary avy aminà lahatsary lasa niparitaka be, izay mihevitra fa ireo shinoa mpihinana ramanavy no mety ho tomponantoka tamin'ilay valanaretina.
Guo Jing : Ny 24 Janoary 2020
Tsy mampino fa dia tony izao tontolo izao.
Mipetra-drery aho. Tsapako fa misy olona eto an-tany, miaraka amiko, rehefa ilay izaho mandre ireo feon'ny mponina ato amin'ny tranobe onenako.
Manam-potoana tsara mihitsy aho hieritreretana izay fomba hahavelomana. Tsy dia manana loharano sy tambajotra fifandraisana ao anatin'ilay rafitra voarindra aho. Raha sanatria aho marary, dia ho tahaka ireo tsy mba mahazo fitsaboana. Vokatr'izany, iray amin'ireo tanjona napetrako ny hijanona lavitra ny aretina. Tsy maintsy manohy manatanja-tena aho.
Tsy nambaran'ny governemanta izay mety ho halavan'ny fotoana hihibohana, na ny fomba hataon'ilay tanàna mba hampihodina azy mandritra izay fotoana izay. Misy olona milaza fa mety haharitra hatramin'ny volana May izy ity, araka ny tarehimarika hita hatramin'izao.
Ao anatin'ity ady ity, ny ankamaroantsika tsy afaka miankina afa-tsy amin'ny herin'ny tenany irery ihany. Tsy miaro antsika ny rafitra. Somary mbola tanora aho. Sarotra ny hisaintsaina ny hahaveloman'ireo olona tsy manan-katao, ireo olona antitra miaina irery, na ireo olona manana fahasembanana, amin'ity ady ity.
Guo Jing : Ny 25 Janoary 2020
Tato anatin'ny andro roa, nanomboka nanisa ny habetsahana legioma atao amin'ny sakafoko aho. Tsy toy izay fahandroko toy ny mahazatra, nahenako ho antsasany ny legioma. Raha mandeha ny tantana, tsy ilaiko ny mandalo amin'ny fihinanana legioma anaty boaty ato anaty fotoana elaela.
Mandritra ny sakafo, niresaka nifankahita tava tamin'ny tambajotra niaraka taminà namana vitsivitsy aho. Tsy azo nialàna ny tsy hiresaka ilay lohahevitra tokan'ny adihevitra : ilay pnemonia ao Wuhan [antsoina ankehitriny hoe COVID-19]. Raha ny marina, tsy misy afa-tsy io no resaky ny olona manerana an'i Shina.
Ny tahotra ny ho tratr'ilay aretina no tena rarintsaina psikôlôjika henjana be manjo ahy izao. Taitra aho io maraina io rehefa, avy nievina, nahita piti-drà kely tanaty mosoarako. Rehefa avy nanary an'iny aho, tsy afaka tao an-tsaiko ny hoe mety tratr'ilay aretina aho.
Guo Jing : Ny 26 Janoary 2020
Tsy tanàna iray monja intsony no nahiboka, fa ny feonay ihany koa.
Tsy nahavita nametraka tao amin'ny Weibo ireo saripika avy tamin'ilay diariko ny andro voalohany aho rehefa nanandrana. Tsy vitako ihany koa ny nametraka ny lahatsoratra. Tsy maintsy navadika ho amin'ny endrika sary aloha ilay lahatsoratra vao nety. Omaly, tsy mbola vitako ihany koa ny nandefa ireo saripika tamin'ilay lahatsoratra ho an'ny faribolan'ireo namako. Vantany vao tafavoakako tao amin'ny Weibo izy ireny, hita nivandravandra be fa noferana ny isan'izay afaka nijery azy. Ny 24 Janoary, 5.000 teo ho eo ireo mpampiasa Weibo no namerina nandefa ilay lahatsoratro, raha tsy nisy afa-tsy olona 45 monja no namerina nandefa ilay lahatsoratro omaly. Dia lasa nihevitra indray aho hoe angamba tsy tsara ny fomba nanoratako azy. Raha tsy vao omaly no nisy ny fanarahana maso ny aterineto, tsy mbola mamohehatra toy ny ankehitriny ireny fepetra ireny. Marobe ny olona no mihiboka any amin'ny misy azy any, ary mila ny aterineto mba hahitana torohay sy hifandraisana tsy tapaka amin'ny fianakaviana sy ny namana. Raha tsy izany, tsy misy mahasamy hafa antsika aminà nosy iray tapaka fifandraisana amin'izao tontolo izao.
Wuhan nandritra ny fihibohana. Sary an'i Guo Jing.
Guo Jin : Ny 28 Janoary 2020
Eo ambany ziogan'ny atmosfera mavesatra ny tanàna iray manontolo. Amin'ny maha-mponina ahy, tsy vitako ny tsy hampitombo misimisy kokoa ny fitandremako. Tsy sahiko ny miresaka na amin'iza, na amin'iza. Lasa manasaratsaraka antsika ilay fanibohana antsika, manapaka ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Kanefa, tsy manaiky ny ho resin'ny zavamisy amin'izao fotoana izao ny olona. Omaly, tokony ho tamin'ny 8 ora alina teo ho eo, nandre olona nikiakiaka tany ivelany tany aho. Betsaka ny olona namoha ny varavarankelin-dry zareo ary nikiakiaka ny hoe « Mahereza, ry Wuhan ». Fomba iray io hamerenanay ny fizakantenanay. Ezahan'ny olona ny mamerina indray ny fifamatorany amin'ny hafa sy mifankahery amin'ny alàlan'ny fikiakiahana miaraka.
Nanomboka ny 27 Janoary, ventesin'ireo mponina ao Wuhan ny hoe « Mahereza, ry Wuhan » rehefa tonga ny manodidina ny amin'ny 8 ora alina. Nitranga koa ny toy izany nandritra ireo hetsipanoherana ilay lalàna fanolorana olomeloka niseho tany Hong-Kong, rehefa nokiakiahan'ireo mpanao fihetsehana ny hoe « Alefa, Hong-Kong a! Mahereza », isaky ny tamin'ny 10 ora alina.
Asehon'ity lahatsarin'ny “South China Morning Post” ity ireo mponina ao Wuhan miaraka mikiaka avy eny am-baravarankeliny avy (amin'ny teny shinoa, saingy misy fanazavàna amin'ny teny anglisy) :
Ireo mponina ao Wuhan miventy [teny faneva iray] avy eny am-baravarankelin-dry zareo mba hifankahery.